Fọlọ Nweta Igwe ọkụ, Fuse Cutout, Glass Insulator- Yongguang
ANY PRODU NA-EGO NA-EKWU EGO
Nkowa: A na-eji mkpanaka ọnụnọ dị elu nke ụdị dị iche iche maka idozi eriri, yana mkpanaka eletriki ọ bụla na ụzọ ụgbọ oloko na usoro nnyefe eletrik. Mpekere nkwụ nwere nnukwu ike ya, ihe siri ike na arụmọrụ kacha mma. A na-emeso mkpanaka ọnụnọ ya na ikpo ọkụ na-eme ka o kwekọọ na udiri ya. Ọ na-achịkwa nke ọma ma nwee ike ibute mmetụta nke oke okpomọkụ na nrụgide dị mfe. Ogwe n ​​’ọnụnọ anyị nwere ụdị abụọ dị mkpa, nke bụ ụdị ụta na ụdị ọkpọ. Roddị ọnụnọ ọ bụla ga-abịa ...
HEBEI YONGGUANG LINE EGO EGO CO., LTD. bụ ụlọ ọrụ teknụzụ dị elu ọkachamara na mmepụta, R&D na ahịa. Ọnọdụ nke Yongguang dị na “Isi Obodo Eletriki” ”a ma ama na China-Yongnian, ọdụ ụgbọ elu 107 National, ọdụ ụgbọ elu Handan na ọdụ ụgbọ okporo ígwè.
Foundedlọ ọrụ ahụ hiwere na 1995, anyị bụ ndị nrụpụta ọrụ ọkachamara na Electric Power Fittings, ọkachasị n’elu eriri dabara adaba na ikpuchi akwa, Componite Insulators, Arrester, Drop-Out Fuse Cutout, Ngwunye eletriki dịka nnyefe ike na ngwaahịa nkesa. Ulo oru a nwere ala nke 8000m2, nke nwere ndi oru 200, nke gunyere ndi oru aka oru 40.